Dôlara tsara kokoa na cryptocurrency? | Vaovao momba ny gadget
Dôlara tsara kokoa na cryptocurrency?
Cryptocurrencies Efa hatramin'ny ela izy ireo no nandao ny toeran'ny te hahafanta-javatra mba ho lasa, amin'ny zony manokana, ampahany lehibe amin'ny toekarena manerantany amin'ny lafiny samihafa. Izy ireo dia tsy vitan'ny hoe voafaritra fotsiny amin'ny sehatry ny tahiry na tombantombana, fa izy ireo dia fananana manan-danja tokony horaisina amin'ny lafiny iray manan-danja toy ny raharaham-barotra ivelanyTalohan'izay dia ny fitehirizana ny vola amerikana irery ihany.
1 Ny tombony azo amin'ny alàlan'ny vola crypto ho toy ny fandoavam-bola amin'ny varotra ivelany
2 Ny Cryptocurrency dia mihinana ny vidin'ny dolara
3 Fifanakalozana Cryptocurrency
Ny tombony azo amin'ny alàlan'ny vola crypto ho toy ny fandoavam-bola amin'ny varotra ivelany
Ny iray amin'ireo tombony ho tsikaritray indrindra ao am-paosintsika dia ny famindrana cryptocurrency manana komisiona tena ambany, na koa tsy manana komisiona amin'ny tranga cryptos manokana. Izany dia satria hanatanteraka ny fifanakalozana ataontsika tsy misy banky, satria tsy mila mpanelanelana isika. Vola tsy azo iadian-kevitra, satria ny komisiona izay angatahan'ny orinasa matetika rehefa manao famindrana iraisam-pirenena dia avo dia avo.
Misy ny manam-pahaizana milaza mialoha fa amin'ny ho avy dia afaka mandoa vola mivantana amin'ny e-Wallet (poketra elektronika itehirizan'ny mpampiasa crypto azy ireo) isika fa tsy hampiasa ny carte de crédit mahazatra. Raha mahita ny fomba hahazoam-bola haingana ny crypto, dia tsy afaka milaza isika fa nofinofy nofinofy izy ireo, fa fahitana ny ho avy tsy ho ela ary misy safidy ho lasa zava-misy.
Ny Cryptocurrency dia mihinana ny vidin'ny dolara
Na dia somary saro-kenatra aza izy dia mazava fa ny vola ampidirina amin'ny crypto any amin'ny toerana hafa dia atsahatra amin'ny fampiasam-bola, ary na dia ny tsena forex aza, hatreto, ny tsena lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, inona ny varotra cryptocurrency efa mihetsika 400.000 tapitrisa dolara eo ho eo ary mitombo hatrany izy io (tsy tokony hohadinointsika fa vao 10 taona lasa izay dia tsy nisy ny vola crypto raha tsy tao an-tsain'ny teolojika sasany).
Ary aorian'ny fianjeran'ny 2018 tsy tapaka dia tsy maintsy asongadintsika ny taona tsara 2019 izay nananan'ny cryptocolaires tamin'ny ankapobeny, nanasongadinana bitcoin, izay na dia nisokatra tamin'ny 2019 ambanin'ny 4.000 dolara aza dia nahatratra izany, rehefa nikitika ny ekoatera tamin'ity taona ity. ny $ 13.000. Na izany aza, ambonin'izay voalaza mialoha ny mpanohitra azy, maro amin'izy ireo no tsy nahita tamin'ny bitcoin mihoatra ny fefy ara-toekarena iraika ambin'ny folo izay iaretan'ny olombelona. Ny ambin'ireo orinasa vaventy, na dia mihoatra ny vidin'izy ireo tamin'ny volana Janoary aza izy ireo dia tsy mba mitondra tena tsara amin'ny tapany faharoa amin'ny taona hatreto.
Hanombohana azy dia hiteny izahay fa tsy tokony hampifangaro ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny Contract for Difference (CFD ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy) miaraka amin'ny vola crypto, miaraka amin'ny varotra amin'ny alàlan'ny CFD miaraka amin'ny forex na amin'ny tsena forex mihitsy, izay ny fifanakalozam-bola tsy maintsy tanterahina, ohatra, orinasa lehibe miasa amina firenena am-polony, miaraka amin'ny vola nasionaly.
Amin'ny forex, mahazo vola na very vola ny olona amin'ny asan'ny forex, satria miova tsy miova ny vidiny, noho izany ny tsara indrindra dia ny mividy ny vola ary mivarotra azy, na manova azy, raha matanjaka kokoa izany, toy ny hataontsika amin'ireo fananana ara-bola hafa .
Fa ny fifanakalozana amin'ny alàlan'ny CFD miaraka amin'ny vola crypto, vola (forex) na harena voajanahary, dia sarotra kokoa ary misy tombony sy fatiantoka, izay holazainay momba izany.
Voalohany indrindra, miasa amin'ny leverage isika, izay midika fa raha mividy CFD amin'ny fananana iray $ 1.000 dolara isika ary ny isan-jaton'ny antoka amin'ny sampana dia 10%, mba hanokafana ny toerana dia tsy maintsy hametraka 100 dolara fotsiny isika, fa raha mihetsika hamely antsika ny vidin'ny fananana 20% no hahafoana 200 dôlara antsika, indroa ny vola napetraka, ary ny mifamadika amin'izany, noho izany, dia maniry mafy ny hahazo, na ahiana ho very, vola bebe kokoa noho ny vokatry ny fampiasam-bola fotsiny.
Izany dia satria rehefa manokatra toerana ny broker dia manarona antsika amin'ny "indram-bola". Mazava ho azy fa raha mitady vola isika dia afaka mamoy azy io, ary ny fahaverezan'ny vola izay "nindrana" antsika dia midika izany hanana trosa isika, ankoatry ny fahaverezan'ny vola nampanjariam-bola.
Noho io antony io dia tena zava-dehibe alohan'ny hidirana amin'ity karazana fiasa ity hahazoana antoka fa ny petra-bola ataontsika afaka mamoy azy io isika (ny safidy hanangonana fatiantoka dia avo dia avo) ary izany manana fanandramana mampiasa vola be izahay eny an-tsena miovaova be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Dôlara tsara kokoa na cryptocurrency?
Azo amidy izao ny mpandahateny bateria Sonos: Sonos Move
Avereno jerena ny mpandahateny rafitra an-trano momba ny angovo 7